७७ जनाको ज्यान जोगा, उने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासँग रहेकी यी महिला को-पाइ,लट को हुन् ? जसको कुनै च, र्चा भएन (भि, डियो सहित) - Onlines Time
सोमवार बुद्ध एयरको विमानलाई ठूलो दुर्घटनावाट जोगाउन सफल भएपछि पाइलट क्याप्टेन आङगेलु शेर्पाको चर्चा निकै चुलिएको छ ।
उनको सामाजिक सञ्जाल खोतलेर ब्यक्तिगत जिवनका कुराहरु पनि सार्वजनिक गर्न थालिएका छन् । माथिको तस्बिरमा क्याप्टेन आङगेलु शेर्पामा देखिएकी युवतीका बारेमा के तपाईलाई थाहा छ ?
उनी पनि पाइलट नै हुन् । जसको नाम पेमा लामा हो । पेशाले पाइलट पेमा क्याप्टेन आङगेलु शेर्पाकी श्रीमती पनि हुन् । उनले पनि विगत ६ वर्ष देखि बुद्ध एयरकै जहाज उडाउँदै आएकी छन् ।
हेर्नुहोस तलको भिडियोमा ।
Prevराजेश पायल राइ को सिक्किमकी स्मितासंग बिहे हुँदै बुवा ममी लाई काठमाडौं बोलाउदै
Nextकेटिले केटि संगै बिहे गरे, यसरी खोले सु’हा ग रातको पोल (भिडियो सहित)